Madaxwaynaha Somaliland Oo Caddeeyay Hankiisa Siyaasadeed Ee Mustaqbalka, Warar Laga Baahiyeyna U Magac Bixiyey | Somaliland Today
← Maareeyaha Kaydka Haamaha Shidaalka Oo Rejo Ka Muujiyey In Qiimaha Shidaalku Hoos U Sii Dhaco
Kalamaanka Wargayska Somalilandtoday Muxuu Ka Yidhi Jawaabta Madaxwaynuhu Ka Bixiyay Musharaxnimadiisa?? →
Madaxwaynaha Somaliland Oo Caddeeyay Hankiisa Siyaasadeed Ee Mustaqbalka, Warar Laga Baahiyeyna U Magac Bixiyey
(SLT-Hargeysa) – Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa dalka ku soo laabtay, kaddib markuu soo dhamaystay socdaal uu ugu maqnaa dalka ingiriiska muddo todobaad ah.
Madaxweynaha ayaa magaalada London ee dalka UK, waxa uu kaga qayb galay Shir caalami ah oo lagu dhiiri gelinayo Maal-gashiga Somaliland, kaasoo lagu soo casuumay Maal-gashadeyaal, Ganacsato u dhashay Somaliland iyo wefti Xukuumadda ka socda oo uu hoggaaminayay.
Md. Siilaanyo iyo weftigiisa oo shalay lagu soo dhaweeyay Madaarka Diyaaradaha ee Magaalada Hargeysa, markii uu soo degay waxa uu Warbaahinta uga waramay waxyaabihii uga soo qabsoomay Socdaalkiisa, siiba muhiimada Shirkii uu kaga qayb-galay London, kaasoo uu yididiilo fiican ka muujiyay natiijada ay kala soo laabteen isaga iyo weftigiisu.
Madaxweyneha ayaa sidoo kale ka hadlay damaciisa siyaasaddeed ee Musharaxnimada Madaxweynaha ee shanta sanno ee soo socoto, mugdi badani galay, kaddib markii la sheegay inuu ka tanaasulay hankiisii Musharaxnimo ee xisbiga talada haya.
Ugu horayn Madaxweynuhu isagoo faahfaahin ka bixinaya natiijada shirka uu kaga qayb galay dalka Ingiriiska waxa uu yidhi “Shirkaa aanu tagnay wuxuu ahaa mid loo qabtay Maal-gashiga Somaliland, horumarkiisa oo sidii loo maal-gashan lahaa wax weyn ka tari kara, wuxuu ahaa Shir dawladda Ingiriiska iyo dadkii kale ee yimidba ay aad uga soo qayb galeen. Wuxuu ahaa shirkaasi mid aad iyo aad muhiim u ahaa oo aanu ku faraxsanahay, kuna soo guulaysanay Illaahayna aanu ka baryayno inuu midhihiisa dhakhso inoogu guuleeyo” ayuu yidhi Siilaanyo.
Dhinaca kale, Madaxweyne Siilaanyo, waxa uu si cad meesha uga saaray hadal haynta tanaasul la sheegay inuu ka sameeyay Musharaxnimada Madaxweynaha Shanta sannadood ee soo socota.
Waxa uu si cad u sheegay inuu Musharax madaxweyne u taaganyahay inta uu Dastuurku u ogolyahay, isagoo carabka ku adkeeyay inuu tartami karo, jirina wax dhibaato ah oo ilaa hadda ka hor istaagaysa inuu tartamo “Markaan tegay waxa la faafiyay inaanan doorashada dambe isu soo taagaynin, taasi waa dacaayadihii faraha badnaa ee waligoodba socon jiray ee mar caafimaadkayga loo sibir-saareeyo iyo mar wax kale loogu gudboba socon jirey, taasna wax ka jiraa ma jiraan”.
Waxa uu intaas ku daray Madaxweynuhu “inta sharcigu ii ogolyahay waan taaganahay (Musharax-baan ahay), wax aan qabaana ma jiraan, dalka iyo dadkaygana waan u shaqaynayaa, waan u shaqayn jiray, waanan u shaqeeyaa, wax dhib ahina ma jiraan, dadkaygana waxaan ka rajeynayaa inay Kalsoonida i siin doonaan”.ayuu yidhi Madaxweynuhu.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii Warbaahinta qaar lagu baahiyay, warar sheegaya in Madaxweyne Siilaanyo ka tanaasulay hankiisii Musharaxa Madaxweynaha ee Kal-doorasheedka inagu soo fool leh ee 2015-ka.
Warkaasi oo ay jawaabo kala gedisan ka bixiyeen Madaxda Xukuumadda iyo Xisbiga Kulmiye, isla markaana dhammaan garabyada siyaasadda ee xisbiga talada hayaa ay beeniyeen, ayaa u muuqda mid ku soo uruuray waxba kama jiraan, maadaama hoggaamiyaha hankiisa mugdiga la geliyay uu daboolka ka qaaday damaciisa biyo-dhibcaanka ah.